Ukhathalelo lweTracheostomy yaBantwana
Inkathalo yeTracheostomy (itraki) yenziwa ukugcina ityhubhu yomntwana wakho icocekile. Oku kunceda ukukhusela ityhubhu evaliweyo kunye nokunciphisa umngcipheko womntwana wakho kusulelo. Ukunyamekela itraki kubandakanya ukutsala nokucoca ulusu lomntwana wakho kunye neenxalenye zetyhubhu. Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kukubonisa ukuba uyikhathalela njani ityhubhu yakhe yetraki, kunye nokuba wenzeni ngexesha likaxakeka.
Tsalela umnxeba ku-911 ngayo nayiphi na kwezi zinto zilandelayo:
Umntwana wakho unengxaki yokuphefumla nasemva kokutsala, ukucoca, okanye ukutshintsha ityhubhu yetraki yakhe.
Umntwana wakho ukhohlela igazi elibomvu eliqaqambileyo.
Awunakho ukufaka ityhubhu yetraki entsha.
Umntwana wakho uyeka ukuphefumla.
Imilebe yomntwana wakho iba luhlaza okwesibhakabhaka.
Buyela kwisebe likaxakeka ngokukhawuleza ukuba:
Ubona ukutya okanye ulwelo olusuka kwitraki yomntwana wakho.
Ukuphefumla komntwana wakho kukhawuleza ngaphezu kwesiqhelo. .
Umntwana wakho unegazi elivela kwitraki okanye kwisistoma.
Nxibelelana nomboneleli wakho wezempilo ukuba:
Umntwana wakho unefiva.
Umntwana wakho ukhuphukile okanye uvalekile kunesiqhelo.
Iimfihlo zomntwana wakho zityheli okanye ziluhlaza.
Ulusu lomntwana wakho olujikeleze ityhubhu lubomvu, ludumbile, okanye luthulule ulwelo olunukayo.
Umntwana wakho ukuxelela ukuba kubuhlungu ukuginya.
Gcina izinto zokugcina nezinto nomntwana wakho ngalo lonke ixesha:
Unokufuna ukutsala okanye ukutshintsha ityhubhu ukuba ivalekile okanye kufuneka itshintshwe ngokukhawuleza.
Ityhubhu yetreyini enye enobungakanani obufanayo netyhubhu yangoku kunye netyhubhu yetrekhi eyi-1 encinci encinci
I-Obturator yetyhubhu nganye yetreyini kunye nesirinji engenanto
Iseti enye yetreyini yetreyini okanye isiphatho setrekhi
Umatshini wokutsala ophathwayo kunye nesipele sebhetri kunye netyhubhu edibanisa kumatshini wokutsala
I-saline engenazintsholongwane kunye nesithambisi esisekwe emanzini
Gcina ingxowa yokuphefumla kunye nemaski
Iinombolo zefowuni ezingxamisekileyo
Landela la manyathelo ukuba umntwana wakho unengxaki yokuphefumla:
Cela umntwana wakho ukuba aphefumle kakhulu kwaye akhohlele. Ukukhwehlela okunamandla kunokunceda ukuhambisa i-mucus, amanzi, okanye ukucaphukisa ngaphandle komoya wakhe.
Ukufunxa ityhubhu yetrekhi yomntwana wakho njengoko kuyalelwe. Oku kuya kunceda ukususa izinto ezithintela indlela yakhe yomoya.
Susa i-cannula yangaphakathi yomntwana wakho. Khangela ulwelo okanye i-mucus ngaphakathi kwe-cannula yangaphakathi. Susa kwaye ucoce i-cannula yangaphakathi ukuba ine-mucus kuyo. Ungayitshintsha kwakhona i-cannula yangaphakathi entsha.
Ngenisa ngobumnene ityhubhu yomntwana wakho. Ukuvula ityhubhu yomntwana wakho kunokuba ngokuchasene nendlela yakhe yomoya. Beka ngobumnene ityhubhu ukuze uqiniseke ukuba ihlala embindini womoya wakhe.
Guqula ityhubhu yetrekhi yomntwana wakho. Faka ityhubhu yetraki entsha. Faka ubungakanani obuncinci ukuba ityhubhu enobukhulu obuqhelekileyo ayizukungena ngokufanelekileyo.
Tsalela umnxeba ku-911 ukuba umntwana wakho unengxaki yokuphefumla. Sebenzisa i-mask-mask phezu kwe-stoma yomntwana wakho ukuze umphefumle ngelixa ulinde uncedo.
Khusela usulelo kumntwana wakho:
Hlamba izandla zakho. Ngalo lonke ixesha hlamba izandla zakho ngaphambi nasemva kokuba unakekele itraki yomntwana wakho. Yitsho ukuba umntwana wakho ahlambe izandla ngaphambi nasemva kokuchukumisa itraki yakhe.
Zicoce izixhobo zomntwana wakho njengoko kuyalelwe. Sebenzisa iindlela zokukhathalela itreyini ecocekileyo okanye engenazintsholongwane ukucoca izixhobo zomntwana wakho.
Sebenzisa isiciko setrekhi phezu kwetreyini yomntwana wakho njengoko kuyalelwe. Musa ukubeka isiciko setrekhi phezu kwetyhubhu yomntwana wakho ngaphandle kokuba umboneleli wezempilo athi kulungile. Oku kuyakukhusela indlela yomoya yomntwana wakho eluthulini nakwamanye amaqumrhu angaphandle.
Coca indawo ejikeleze itraki yomntwana wakho njengoko kuyalelwe. Indawo ejikeleze itraki yomntwana wakho ibizwa ngokuba yi-stoma.
Gcina umlomo womntwana wakho ucocekile. Amathe kunye neencindi zineentsholongwane ezibangela usulelo ukuba zingena kwindlela yomoya yomntwana wakho. Nceda umntwana wakho ahlambe amazinyo akhe kabini ngemini. Wamkele umlomo wakhe xa kufuneka njalo. Yenza ukuba umntwana wakho asebenzise umlomo njengoko usiyalelwe.
Cela umntwana wakho ukuba aphefumle kakhulu kwaye akhohlele amaxesha ali-10 ngeyure nganye. Oku kuya kunciphisa umngcipheko wosulelo lwemiphunga. Umntwana wakho ngekhe akwazi ukwenza oku ukuba ukwiphepha lokuphefumla. Yenza umntwana wakho athathe umoya ophefumlelweyo kwaye awubambe ixesha elide kangangoko anakho. Mxelele ukuba makaphume umoya aze akhohlele kakhulu. Ukuphefumla nzulu kunceda ukuvula umoya wakhe.
Ukufunxa ityhubhu yomntwana wakho:
Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kukuxelela xa ufuna ukutsala ityhubhu yakhe yetraki. Cela umntwana wakho ukuba athabathe umoya kwaye akhohlele kakhulu ngaphambi kokuba utsibe itraki yakhe. Oku kunokuba yiyo yonke into efunekayo ukucoca indlela yakhe yomoya.
Jonga imiqondiso yokuba umntwana wakho ufuna ityhubhu yakhe ifunxwe. Ukufunxa xa umntwana wakho engakwazi ukukhohlela kwiimfihlo zakhe. Umntwana wakho unokubonakala engenakuphumla okanye esoyika, kwaye ukuphefumla kwakhe kungangaphezulu okanye kukhawuleze kunesiqhelo. Unokubona i-mucus kwityhubhu yakhe yetraki okanye ivela kumacala etyhubhu yakhe yetraki. Ulusu lwakhe lunokubonakala luhlaza okanye luhlaza okwesibhakabhaka.
Musa ukufunxa ityhubhu yomntwana wakho emva kokuba etyile. Unokukhohlela okanye ukugabha ukuba utsala ngokukhawuleza. Buza umboneleli wakho wezempilo ukuba ulinde ixesha elingakanani ukutsala.
Lungiselela umatshini wokutsala umntwana wakho. Umatshini ngamnye wokutsala unesilinganisi soxinzelelo. Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kukuxelela ukuba ungasebenzisa uxinzelelo olungakanani xa utsala ityhubhu yakhe yetraki. Vavanya uxinzelelo ngaphambi kokutsala. Yenza oku ngokuvala ivalve yokutsala kwi-catheter ngesithupha sakho.
Ukufunxa ityhubhu yomzila womntwana wakho. Faka i-catheter ide idlule esiphelweni ityhubhu. Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kukubonisa ukuba ungayifaka kude kangakanani i-catheter. I-catheter inokuba nemilinganiselo ephawulwe kuyo ukuba uyilandele. Unokumakisha i-catheter ukuze ungayibeki kude kakhulu. Vala ivalve yokutsala njengoko ususa i-catheter. Kuya kukuthatha ngaphantsi kwemizuzwana eli-15 ukususa i-catheter yokutsala.
Ukufunxa ityhubhu yomntwana wakho okwesibini xa kufuneka njalo. Ukuba umntwana wakho usebenzisa ioksijini, yitshintshe ioksijini kangangemizuzwana engama-30 ngaphambi kokuba uphinde uzame ukutsala itraki yakhe.
Ukufunxa umntwana wakho I-Mucus kunye negazi kunokuvuza kumacala etyhubhu yomntwana wakho. Tsala ngobunono lo mmandla ngecatheter yokufunxa.
Yilahle kude icatheter yokutsala okanye ucoce njengoko kuyalelwe. Iicatheters ezilahlayo ezilahlwayo kufuneka ziphoswe kude. Iicathet ezinokuphinda zisebenze zinokucocwa kwaye ziphinde zisetyenziswe. Ukucoca i-catheter enokuphinda isebenze, ukutsala amanzi angenawo umoya kunye nomoya nge-catheter njengoko kuyalelwe. Sula ngaphandle ngotywala okanye nge-hydrogen peroxide njengoko kuyalelwe. Vumela i-catheter ukuba yome umoya.
Ukunyamekela ityhubhu yomntwana wakho:
Coca i-cannula yangaphakathi ubuncinci kube kanye yonke imihla. Awudingi ukwenza oku ukuba umntwana akanayo i-cannula yangaphakathi.
Hlamba izandla zakho unxibe iiglavu.
Ukufunxa itreyi yomntwana wakho.
Susa i-cannula yangaphakathi. Coca ngaphakathi nangaphandle kwe-cannula. Sebenzisa i-hydrogen peroxide kunye nebrashi ethambileyo okanye isicoci sombhobho njengoko kuyalelwe. Qiniseka ukuba ususa lonke igazi kunye neencindi ezomisiweyo.
Yipule i-cannula yangaphakathi nge-saline engenazintsholongwane kwaye uyibuyisele kwi-cannula yangaphandle. Kuya kufuneka iye endaweni yayo.
Ukuba awukwazi ukucoca i-cannula kakuhle, yilahle kude kwaye usebenzise i-cannula yangaphakathi entsha.
Jonga uxinzelelo lwekhofu ubuncinci kube kanye ngosuku. Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kukubonisa indlela yokujonga uxinzelelo lwekhofu. Mbuze ukuba ungakanani na umoya omele ukuba usecofini yakhe. Kuya kufuneka wongeze okanye ususe umoya kwikofu yomntwana wakho. Kubalulekile ukuba ikhafu yomntwana wakho iqulethe isixa esifanelekileyo somoya. Oku kuya kuthintela iingxaki zokuphefumla okanye ukonakala kwindlela yakhe yomoya.
Gcina amanzi kunye nezinye izinto ngaphandle kwetyhubhu yetraki yomntwana wakho. Musa ukuvumela umntwana wakho adade. Beka ikhaka lokuhlamba okanye ikepusi yetraki ngaphezulu kwetraki yakhe ngelixa ehlamba. Oku kuya kuthintela amanzi ekungeneni kwindlela yakhe yomoya. Sukusebenzisa iipowder okanye izitshizi kufutshane nethumbu lakhe.
Khathalela ulusu lomntwana wakho:
Coca isikhumba somntwana wakho ubuncinci kube kanye yonke imihla okanye njengoko kuyalelwe. Kuya kufuneka uyicoce rhoqo ukuba ukhohlela umchamo omninzi.
Hlamba izandla zakho unxibe iiglavu. Oku kuya kuthintela usulelo.
Ukufunxa indawo ejikeleze isigxina sakhe. Oku kuya kunceda ukususa i-mucus.
Coca ulusu lomntwana wakho ngakwistoma. Sebenzisa la manyathelo alandelayo ukucoca ulusu olujikeleze ityhubhu yakhe yomzila:
Unokuxelelwa ukuba usebenzise isepha kunye namanzi okanye i-hydrogen peroxide ukucoca ulusu lomntwana wakho. Hlanganisa i-hydrogen peroxide kunye nenani elilinganayo lamanzi angenazintsholongwane. Thela lo mxube kwi-gauze ecocekileyo. I-gauze kufuneka ifumile kodwa ingafakwanga.
Sula ngobumnene ujikeleze isigxina somntwana wakho. Qala ngokusondeleyo kumntwana wakho kwaye uphumele ngaphandle. Sebenzisa i-gauze entsha ngalo lonke ixesha usula indawo entsha yesikhumba sakhe. Oku kuya kuthintela usulelo. Dipha iingcebiso zomqhaphu ezicocekileyo kumxube wehydrogen peroxide. Sebenzisa iingcebiso zomqhaphu ukucoca phantsi kweeflanges.
Thela amanzi amdaka kwi-gauze ecocekileyo. Sebenzisa amanzi acocekileyo ukuhlamba i-hydrogen peroxide. Qala ngokusondeleyo kumntwana wakho kwaye uphumele ngaphandle. Sebenzisa i-gauze entsha ngalo lonke ixesha usula indawo entsha yesikhumba sakhe.
Sebenzisa eyomileyo, ecocekileyo, kunye negauze ukuze ubambe ngobunono indawo ejikeleze isigxina sakhe.
Faka isicelo seoli yokulwa ne-antibacterial kuphela ukuba uyalelwa ngumboneleli wezempilo.
Coca iiflekhi zetyhubhu. Dampen i-gauze ecocekileyo kunye ne-hydrogen peroxide kunye nomxube wamanzi. Khuhla ngobumnene i-flanges ukususa i-mucus okanye i-crust.
Guqula amaqhina wetreyini emanzi okanye emdaka. Bamba, ityhubhu yomntwana wakho xa uguqula amaqhina. Sika okanye ucofe amaqhina kwiiflanges. Bopha iqhina elitsha entanyeni yakhe. Qhoboshela iziphelo zethayi kwiiflanges. Qiniseka ukuba unokulingana iminwe emi-2 phakathi kwentamo yakhe kunye nethayi. Izibophelelo ezixineneyo zinokwenza kube nzima ukuba umntwana wakho aphefumle. Izibophelelo ezilahlekileyo zinokubangela ukuba ityhubhu iphume endaweni.
Beka i-gauze phakathi kolusu kunye neeflanges. I-Gauze iya kugcina ulusu lucocekile kwaye lomile. Akunakufuneka usebenzise i-gauze ukuba umntwana wakho akanazo iimfihlo. Musa ukusika i-gauze. Songa i-gauze endaweni yoko umntwana wakho angaphefumli kwimicu yokusika.
Jonga ulusu yonke imihla ukuba akukho sifo. Jonga ububomvu okanye ukudumba kolusu olujikeleze ityhubhu yakhe. Jonga kwakhona ubofu, ukopha, okanye irhashalala.
Guqula ityhubhu yomntwana wakho:
Guqula ityhubhu yetraki rhoqo njengoko umboneleli wezempilo womntwana wakho eyalela. Kuya kufuneka ukuba utshintshe ityhubhu yetraki ukuba iphuma endaweni. Kuya kufuneka ukuba utshintshe ityhubhu ukuba umntwana wakho uthi uziva engonwabanga.
Lungisa ityhubhu yetraki entsha. Faka i-obturator kwityhubhu entsha. Vavanya ikofu ukuba itraki yomntwana wakho inayo. Faka impefumlo emoyeni ukuze uqiniseke ukuba iyasebenza, kwaye ke makuphume umoya. Beka inani elincinci lesithambisi esisekwe emanzini kwisiphelo esisezantsi setyhubhu. Sukusebenzisa i-petroleum jelly njengesithambisi.
Beka umntwana wakho flat. Beka umqamelo okanye usongele itawuli emva kwentamo yakhe. Oku kuya kunceda ukuguqula intloko yakhe kwaye uvule indlela yakhe yomoya. Abantwana abadala banokuhlala phezulu ukuze batshintshe ityhubhu.
Cima ikhafu kwisitampu setraki yomntwana wakho ukuba unayo. Ungawonakalisa umoya womoya womntwana wakho okanye istoma ukuba awuyicimi ikhafu ngaphambi kokuba ususe ityhubhu. Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kukubonisa indlela yokujongana nekhofu. Ncamathisela isirinji ekupheleni kwekhafu. Cothisa kancinci emva kwesirinji ukuze ususe umoya.
Susa ityhubhu yomntwana wakho xa ephefumla. Ngenisa ngobunono ityhubhu yetraki yakhe phezulu nangaphandle.
Faka ityhubhu yetraki entsha kwi-90 ° angle. Yalatha ityhubhu ngaphakathi nangaphantsi. Susa isifumani ngoko nangoko emva kokuba ityhubhu yetraki ikho. Faka i-cannula yangaphakathi entsha okanye ecocekileyo ukuba umntwana wakho uyayisebenzisa.
Inflate cuff njengoko kuyalelwe ukuba itraki yomntwana wakho inayo. Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kukubonisa ukuba ungakanani na umoya oza kuwufaka kwikhefi. Isikhafu esinomoya omninzi sinokuvuza, saphule, okanye sonakalise umoya womoya womntwana wakho.
Khusela ityhubhu yakhe yetreyini ngamaqhina etreyini. Qiniseka ukuba amaqhina etrektara yomntwana wakho aqinanga kakhulu. Kuya kufuneka ukuba ulingane iminwe emi-2 phakathi kweethayi nentamo yakhe. Faka isicelo igawuli ecocekileyo phakathi kolusu kunye neeflanges njengoko kuyalelwe.
Gcina iimfihlo zomntwana wakho zincinci:
Nceda ugcine iimfihlo zomntwana wakho zincinci ukunceda ukuthintela iitraki yakhe ekubeni ivaleke. Iimfihlo ezibhityileyo ziya kwenza kube lula kuye ukuba akhohlele ulwelo okanye inwebu.
Cela umntwana wakho ukuba asele iziselo ezininzi. Buza ukuba ungakanani ulwelo umntwana wakho ekufuneka elusele suku ngalunye kwaye loluphi ulwelo olulungele yena.
Beka umswakama ofudumeleyo kwigumbi lomntwana wakho. Landela izikhokelo zokucoca i-humidifier.
Sebenzisa izixhobo ezongeza ukufuma kwindlela yakhe yomoya. Umboneleli wezempilo womntwana wakho uya kukuxelela ukuba ufuna ukusebenzisa ezi zixhobo. Sebenzisa indawo yokufudumeza ubushushu (i-HME), ikhola yetraki, okanye isimbozo se-stoma sokugquma njengoko kuyalelwe. I-HME ifakela ityhubhu yomntwana wakho kwaye ikhusela ukulahleka kobumanzi. Ikhola yetraki idibanisa kumatshini onikezela umoya opholileyo kwitraki yakhe. Izambatho ze-stoma zigutyungelwe kwaye zinxitywe ngaphezulu kwetyhubhu yetraki yakhe.
Landela ugqirha womntwana wakho njengoko kuyalelwe:
Bhala phantsi imibuzo yakho ukuze ukhumbule ukuyibuza xa utyelele umntwana wakho.
isisombululo se-ofloxacin ophthalmic usp 0.3
5-htp kunye ne-adderall
ngubani xa kutheni apho kutheni ispanish
Iziphumo ebezingalindelekanga zomtshayelo
kunye ne-bladder spasms
Yintoni elungileyo ye-benadryl